WAXYAALAHA KALA DUWAN EE LOO YAQAAN "VICTORIA" - VITICULTURE
Wax kasta oo ay kala duwanyihiin dhammaan noocyada kala duwan ee canabka ah ee laga heli karo xaaladaha waddankeena, si kastaba ha ahaatee, midkeen kastaaba wuxuu leeyahay xayawaankayaga.
Haddii aad tahay taageere dhadhan ah caleenta, waxay door bidaan noocyada canab khafiif ah oo doonaya in ay koraan kooxo waaweyn, oo xor u ah inay doortaan canjaarada Fiktooriya.
Dabcan, kulayliyeyaasha badhiga badani waxay inta badan ku hadlaan si xunxun kala duwan, sababtoo ah waxay dhab ahaantii leedahay cillado.
Waxaan isku dayi doonaa inaan si faahfaahsan u tixgelino labadaba qaababka iyo waxtarka xun ee noocyada kala duwan iyo la wadaagno talooyin ku saabsan sida loola tacaalo dhibaatooyinka "Victoria".
Waa maxay, canab "Victoria": sharrax faahfaahsan ee kala duwan
Mucjiskan miiska, midhahaas oo kaliya ayaa soo bandhigaya si fiican, waa natiijada xulashada saynisyahanka Ruushka. Si aad u hesho, isku dhaf ah oo isku dhafan oo kala duwan ayaa loo isticmaalay. Gaar ahaan, Save Vilar 12-304 canab ayaa loo isticmaalay deeq bixiye iska caabin ah.
Waxaa la dhex mari jiray iskudhaf dhexdhexaad ah noocyada noocan ah ee Euro-Amur sida "Vitis Winifers" iyo "Vitis Amurenzis". Marka lagu daro xasillooni aad u fiican, noocyada cusubi waxay u muuqdaan inay yihiin skoroplodny: dalagyada ugu horreeya waa baadiyaha canugta Victoria ee bixiya 2-3 sano kadib beerashada ama tallaalka.
Astaamaha farabadan ee canab "Victoria": sifooyinka kala duwan
Qeybaha kala duwan ee canabka ayaa lagu sharraxay qiimaha gaarka ah ma aha oo kaliya sababtoo ah waxay leedahay miro aad u dhadhan leh, laakiin sidoo kale sababtoo ah kooxo waaweyn oo xajmi leh. Celcelis ahaan tiro ka mid ah farabadan canabka ah ee kala duwan ee noocyada kala duwan waa 0.5-0.7 kiilo garaam. Iyada oo beero wanaagsan iyo dalagyada dalagga, xajmiga canabku si weyn ayuu u kordhay. Nooca shimbiraha waxaa badanaa laga helaa qashinka, oo leh miro yar oo is dulfuulan.
Midna waa inuusan iloobin in uu wax ka ogaado qiyaasta miraha canabka ah ee kala duwan ee noocyada kala duwan: Inaad haysato qaab-firfircooni, qiyaasta celceliska hal berrito waa 2.7 x2,2 sentimitir. Isla mar ahaantaana, celceliska mass of berry waa qiyaastii 6-7.5 grams. Inkastoo dhexda dalagga geedka canabka ah uu ka fog yahay ugu badnaan, haddana waxay u qalantaa dareen iyo ixtiraam. Si loo kala saaro noocyada kala duwan ee canabka "Victoria" waxay noqon kartaa midabka midabka cas-cas oo ah maqaarka berry.
Dhadhanka nooca berry ah waa mid aad u fiican oo udhexeeya, kaalin muhiim ah oo ay ku ciyaaraan jirka hilibka ah oo casiir leh. Iyada oo Bisaylkiisa buuxa ee canab, berry ayaa sidoo kale hela dhadhan gaar ah ee xawaashka. Waa in la ogaadaa in maaddada sonkorta ee celceliska celcelis ahaan ay tahay 18% heerka acidic ee 5-6 g / l.
Noocyada fruiting iyo noocyada dhalidda "Victoria"
Kuurkan kala duwan ee canugkani wuxuu leeyahay awood korriin ama mid dhexdhexaad ah. Isla mar ahaantaana, ka mid ah caleemaha oo dhan oo ku jira xilliga koritaanka, qiyaastii 70-90% waa wax miro dhal ah. Sidaa darteed, hal baadiyaha ah soo saari karo wax-soosaarkooduna aad u sarreeya, taas oo ah sababta ay duurka ugu badan tahay.
Isu-dheelitir la'aanta, taas oo ah, tirada qoob-ka-dhaca ee ku dhacda 1 biqil oo kala duwan "Victoria", waa 1.4-1.8. Qayb yar oo ka mid ah beergooyska ayaa laga dhigi karaa tallaabooyinka, inkastoo rucubyada iyaga ku jira ay ka yar yihiin caleemaha waaweyn ee muhiimka ah. Si kastaba ha noqotee, xajmiga ugu fiicnaanta ee kan digaaga ah waa 25-30 indhood.
Marka la eego wakhtiga dhirta beergooyska, oo kala duwan "Fiktooriya" si sax ah ayaa loola jeedaa noocyada hore. Xilliga sii kordhaya ee geedaha canabka ah ee noocyada kala duwan waxay ku saabsan yihiin 115-120 maalmood. Sidaa darteed, horeba tobankii sano ee saddexaad ee Agoosto, waxaa suurtogal ah in ay ku raaxaysato kooxihii ugu horreeyay ee ku dhuftay. Goynta goosashada oo dhan waa la sameyn karaa dhammaadka bisha.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan canab tiknoolajiyadeed ugu fiican
Jawaabaha su'aasha, maxay yihiin faa'iidooyinka kala duwan ee canabka "Victoria"?
Kala duwanaantu waa wax aad u fiican oo kor u kici kara goobaha guriga. Markaad beertid mid ka mid ah baadiyaha, beergooyska ayaa kugu filnaan doona inaad ku raaxaysato naftaada oo aad kuula dhaqanto miro cusub oo ah dhamaan qaraabadaada iyo jaarkaaga. Marka koraan canab "Fiktooriya" oo leh qiyaas wayn, waxaa suurtogal ah in la iibiyo dalagga iibka. Laakiin, marka laga reebo wax-soosaarka tayo sare leh, tayada "Victoria" waxay sidoo kale leedahay faa'iidooyinka soo socda:
• Caleemaha Grapevine aad ayay u wanaagsan yihiin, iyadoo intooda badani ay midho dhalaan.
• La qabsiga heer sare ee gooynta kala duwan iyo gooynta xididada.
• Cadaadiska cudurada ugu caansan ee saameyn kara beero canabka ah, noocyada kala duwan ee "Fiktooriya" waa mid aad u sareeya oo lagu qiimeeyo buufin ka hortag ah baadiyaha.
• Kala duwanaanshuhu wuxuu ku haboon yahay meelo badan oo beerto iyo beeraan, xitaa gobolka Moscow. Waxyeello geedka canabka ah lama arko xitaa marka uu barafku yahay -26 ° S. Si kastaba ha noqotee, iyadoo suurtagal ah in hoos loo dhigo heerkulka jiilaalka xitaa hooseeyo, waa lagama maarmaan in la daboolo baadiyaha.
• Iyadoo daryeel joogto ah oo joogto ah, fruiting iyo tayada dalagga ayaa la hagaajiyaa.
Faa'iidooyinka canab "Victoria" iyo sida loola macaamilo
Marka ugu horeysa ee kala duwanaanta, oo aad dhab ahaantii u baahan tahay inaad ogaato, waa joogitaanka oo kaliya ubax dumar ah ee baadiyaha sabiib ah. Sidaas darteed, marka ubax, baadiyaha waa mid aad u liidata pollinated, waxaa jira goosashada ee peck. On this, ku xigta baadiyaha "Fiktooriya" hubi inaad ku beeri noocyo kale oo sabiib ah, ubax ah kaas oo ku soo duula. Marka labaad, dalagyada waaweyn oo aad u badan ayaa ka badan baadiyaha, ka dib markii taas oo berry iyo canab koraan yar.
Sidaa darteed, waxaa jira baahi kale - dalacsiinta dalagga. Gaar ahaan, labada inflorescences iyo kooxo kale inta lagu guda jiro dhismaha berry ayaa lagu dabacsan yahay. Waxaad si buuxda uga saari kartaa dalagga haragga.
Faa'iido kale oo canab ah macaan "Victoria" waa iyaga wasmo. Sidaa darteed ma keeni karaan waxyeelo aad u xoog badan dalagga, waxaad ku dhejin kartaa daboosho khaas ah ama ka gubi karo hudheelka. Tuubooyinka ayaa noqon kara sida soo socota:
• Goobta beerta canabka ah waxaad ku dhejin kartaa bangiyada ay ku buuxsamaan sonkor aad u macaan ama xalal malab, oo ku jira 0.5% chlorophos.
• Isku daboolka isku midka ah, waxaad ku faafi kartaa miraha aad u bislaaday, oo lagu daaweeyo sunta cayayaanka.
Waxa aad u baahan tahay si aad u koraan on site ah baadiyaha wanaagsan ee canab "Victoria": xeerarka beeritaanka noocyo
Waa suurtagal in la soo waco geeddi socodka beerto canbaar, inkastoo ay nuucyada gaarka ah ku filan halkan. Waa lagama maarmaan iyo si sax ah u dooranaya wax beerto, oo dooro waqtiga ku haboon iyo meel loo beerto, ugu dambayn, si sax ah u diyaariso godadka. Waxay la socotaa dhamaanteed oo aan ku soo bandhigi doono hoos.
Sidee iyo sida loo kiciyo canab "Victoria": qaababka geedo beerto iyo gooynaya geedo
Canabku waa mid si aad ah loo faafiyo siyaabo badan, kuwaas oo ka mid ah ugu wax ku oolka ah ay ku beeri ku geed geedo gaar ah iyada oo la kaashanayo seedling iyo gooyo jarida a stock of geed jir ah ee noocyo kale oo sabiib ah. Ma suurtagal in la yiraahdo si aan kala go 'lahayn oo ah qaababkaasi waa mid waxtar leh. Si kastaba ha noqotee, haddii aad boggaaga ka jirto wax kayd ah oo ka timaada geedkii hore - xaqiiqda, uma baahnid inaad dooratid.
Canaan beerto "Victoria" oo leh caawinaad kaabash ah waxay caawin doontaa koraan noocyo saafi ahtaas oo aan lahayn kiisaska lagu gudbin doono cudurada iyo cayayaanka ee horey u ahaan jiray. Si kastaba ha ahaatee, beeritaanka noocyada kala duwan ee dul saarnaanta waxay kori kartaa baadiyaha badan oo xoog leh oo soo saari kara dalagyo badan oo badan. Sidoo kale, kicinta on stock xawaaraha ilaa geedi socodka ah sii kordhaya baadiyaha cusub, maadaama ay horay u leeyihiin nidaam xidid si fiican u horumarsan ee beerta beertii hore.
Goorta ay bilaabaan noocyo beerto "Victoria": waxaan dooranaa taariikhaha saxda ah
Dabeecadda dhaqankaan waa in la beeray labada guga iyo xilliga dayrta. Isla mar ahaantaana, waa mid aan loo baahnayn in laga jawaabo wakhtiga uu ku habboon yahay Haddii seedling guga wuxuu fursad u leeyahay in si wanaagsan loo aaso xilliga dayrta ee jiilaalka, markaa dayrta waxay muujinaysaa dulqaadkeeda hore ee jiilaalka kowaad iyo geli doona koritaanka badanaa xilliga dayrta. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ogaato waxyaabahan soo socda:
• Taariikhaha beeritaanka geedka canab "Victoria" ayaa aad u fidsan.. Robotyada noocan oo kale ah ayaa la samayn karaa laga bilaabo maalmaha ugu dambeeya Maarso iyo dhammaadka bilowga Juun. Haddii aad doonayso in aad ku beerto jarista canabka, ka dibna waxaad dooran kartaa ugu horreyn, laakiin for seedling leh caleemaha cagaaran, waxaa fiican inaad doorato wakhti kulul. Waxa kale oo muhiim ah in xilliga la qabsashada wakhtiga la beerto oo keliya beertii beertu ay aad u muhiim u tahay hoyga. Si taas loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa sanduuq hoose oo leh daloolka caarada cutubka ama abuurista. Iyadoo ay soo ifbaxayaan kulaylka iyo calaamadaha ugu horreeya ee xididida waxaa laga saari karaa.
• Taariikhaha dayrta ee canabka beertu waa mid gaar ah oo lagu go'aamiyo xaaladaha cimilada. Dhammaan ka dib, dhirta waa in la beeray waqti dambe, marka aanay wakhti dambe helin koritaanka (taas oo ah mid aan loo baahnayn), laakiin wali ma haysto wakhti ay ku soo degaan maryaanka ugu horeeya, taas oo dhaawici karta. Sidaa darteed, waqtiga ugu haboon waa bartamaha bisha Oktoobar. Inkastoo, baahi dheeraad ah ay tahay in la tixgeliyo xaaladaha cimilada ee gobolkaaga cimilada iyo sanadka gaar ah.
In meesha ay tahay mid aad u doorbidan si ay u beeri a baadiyaha sabiib ah?
Canab waxaa lagu yaqaanaa dhaqanka koonfureed, kaas oo jecel qoraxda diiran iyo dabaylaha dabacsan. Iyada oo leh jawi noocan oo kale ah, grapevine wuxuu u kori karaa meel kasta iyo si kasta, iyada oo la bixinayo wax soo saarka aan hore loo arag. Hase yeeshee, xaaladaha cakiran iyo kuwa aan fiicnayn ee abuurka canabka, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u doorato meel ku taal goobahaaga:
• Waa in si fiican u iftiimaa, kiis kasta oo aan ku dhicin dhirta beerta ama dhismayaasha kale.
• Cinjiradu aad ayay u baqayaan qabsashada, taas oo si gaar ah u waxyeeleyn karta miraha, taas oo wali ah qaabka inflorescences.
• Inkastoo ay jirto iswaafajinta wanaagsan iyo qabatim la'aanta noocyada kala duwan, waxay u baahan tahay ciid wanaagsan oo bacrin ah. oo leh hab dhaqameed beeraha wanaagsan, dhalidda ee baadiyaha canabku si weyn u kordhiyaa.
Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la beero dalagga koonfurta ee goobtaada, iyo doorbidada meelo lagu ilaaliyo dhismayaasha ama dhulalka dabaysha. Haddii ay dhacdo in ciidda aagga ay aad u liidato, bacriminteeda ayaa si wanaagsan loo hagaajin karaa: 1-2 sano ka hor intaan beerin lahayn, tiro badan oo ah Bacriminta dabiiciga ah iyo macdanta waa in la adeegsadaa; si laysugu daro nooca saboolka ah ee carrada ah ee la socota, kaas oo gacan ka geysan doona helitaanka macnaha dahabka ah.
Canab dhirta "Fiktooriya" iyadoo la adeegsanayo geedo kala duwan: maxay yihiin sifooyinka geedi socodka?
Beerta canabku waxay ku bilaabataa kala-doorashada kala duwanaanta canabka, iibsashada ama beerashada madaxbannaan ee sapling iyo diyaarinta daloolka. Waxaa ugu wanaagsan inaad iibsato seedling xilliga dayrta, marka xanaanada gaarka ah ay soo iibiyaan tiro badan oo iyaga ka mid ah. Sidaa darteed, waxaad dooran doontaa noocyada kala duwan ee loo baahan yahay iyo seedling aad u fiican, shuruudaha tayada kuwaas oo ah midabka cad ee xididada iyo midabka cagaaran ee gooyay.
Waxaad ku kori kartaa seedling adiga oo ka jaraya kaydinta ciidda Febraayo heerkulka hawada 12 ° C oo lagu beeray carrada qoyan.
Tooggu sidoo kale waxaa loo diyaariyey dhowr maalmood ama xitaa bil ka hor beerashada seedling. Qoto dheer iyo ballaaran waa in ay ahaataa ugu yaraan 0.8 mitir, kaas oo u ogolaanaya inuu hoosta ku dhejiyo xaddiga lagama maarmaanka ah ee bacriminta ee baadiyaha mustaqbalka. Qeybta hoose:
• Lakabka jajabka, qiyaastii 5 sentimitir dhererka.
• Lakabka carrada bacrin ah, oo ah lakabka ugu sareeya ee dhulka, laga saaro marka qodo dalool. Miisaanka lakabka waa qiyaastii 10 sentimitir.
• Laabashada 2 baaldiyo qoyan.
• Lakabka kale ee ciidda bacrin ah.
Dhamaan waxyaabahan "maaddooyinka" (marka laga reebo burburka) ayaa si fiican isku dhafan, samaynta cunto bacrin ah geedo. Intaa ka dib waxaan ku seexannaa lakab kale oo ka mid ah carrada aan bacriminta ahayn ee aan bacriminta lahayn oo ka tago oo dhan si ay u degaan.
Beerta tooska ah ee canabku waa mid sahlan: waxaan hoos u dhigeynaa seedling godadka ilaa heerkulaha xididada xididka oo si taxadar leh u aaso. Si arrintan loo sii wanaajiyo, dhexdhexaadinta geeddi-socodka barafka waxaad ku shubi kartaa baaldi biyo ah ceel, kaas oo u hoggaansami doona lakabka kowaad ee ciidda la aasay.
Ka dib markii laga beerto, sapling waxaa la waraabiyaa 2-3 baaldiyo dheeraad ah oo biyo ah. Dhawaan waa mid aad muhiim u ah in la qodo taageero adag. Ciidda ku wareegsan seedling waa mulched.
Isku-qabsasho canab ah "Fiktooriya" oo ku saabsan suuqyada kala duwan
Wixii canab "Victoria", oo leh korriin daciif ah baadiyaha, doorashadan waa mid la aqbali karo. Ka dib oo dhan, isagoo ku duudduubay jirid noocaan ah si rootstock xoog leh-koraya, waxaan heli doonaa baadiyaha xoog leh leh dalagyo badan oo badan.
Goynta waa inay ka kooban tahay 2-3 indhood. Qaybta hoose ee ka mid ah waa qasab in la jarjaro, taas oo u ogolaaneysa in ay si adag u xirto stock ah. Qaabka qaabka loo yaqaan 'slice' waa in lagu dhejiyaa qaabab. Qaybta kore waxaa lagu duugay, taas oo ah habka lagu ilaaliyo qoyaan ee gacanta ilaa inta ay qaadato xididka iyo ma jiidi karto nafaqooyinka iyo qoyaanka ka soo saarka.
Hantidu waa dhoobo, oo ku hadhay ka dib markii laga saaray burkii hore ee sabiib ah. Qeybta gooyuhu waa in si taxadar leh loo nadiifiyaa si siman oo loo siman yahay loona dhejiyo dhexdhexaad. Waa mid si qaas ah u kala qaybsan ee jirida la dhigo oo si adag loola xiro sababtoo ah xayiraadda kaydka iyadoo la adeegsanayo xarig ama dhar adag.
Iskudhinta waa lagama maarmaanka ah dhoobo qoyan, saamiyadu waa la waraabiyaa iyo mulched.
Waa maxay daryeelka uu u baahan yahay canab "Fiktooriya": wax yar oo ku saabsan shaqada ugu weyn ee beerta canabka ah
Bushka sabiibka ah wuxuu si joogto ah u baahan yahay in la waraabiyo oo la quudiyo. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in tan la sameeyo xilliga gu'ga, marka uu si tartiib tartiib ah uga baxo jimicsiga oo lumiya inta badan awoodiisa inta lagu jiro waqtigan. Bacriminta, labadaba organic iyo macdanta, labaduba waxay ugu fiican yihiin ciidda qashinka. Ka bacdi ka dib, ciidda waa in si fiican loo qoyay. Tan waxaa la sameeyaa ugu yaraan 3 jeer xilli ciyaareed: 2 jeer ka hor geedo ubax ah iyo hal mar dhamaystirka geeddi-socodkan.
Inta lagu jiro sanadihii abaaro daran, qoyaanka macmalka ah ee ciidda beerta canabka ah waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido leh labada baadiyaha iyo goosashada. Ka dib markii la waraabiyo, carrada waxaa lagu daboolay lakabka dhadday ama dhoobada, taas oo u adeegta sida mulch.
Sidoo kale, daryeelka beerta canabka ah waxaa ka mid ah manjooyin joogto ah ee baadiyaha iyo daaweyntiisa laga bilaabo caabuq suurto gal ah oo leh cuduro kala duwan. Nidaamka koowaad waxaa lagu fuliyaa inta badan xilliga dayrta, xilliga duurka dagan. Kudar budo 2-3 ah indhaha. Bushka loo yaqaan 'canjag' ee loo yaqaan 'Viktoria' oo ah fanaani aad u door bidayso Iyo halkan ku buufinta canab lagu qabtay guga, halka labada baadiyaha iyo jirrooyinka ay soo kacayaan.
Dhirta canabkana waxaa lagu samayn karaa isla waqtiga waraabka. Waxaa loo adeegsadaa diyaar garaynta nooca loo yaqaan 'herbicide' kuwaas oo ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu iibsado dhibco gaar ah oo iib ah.